रोजाइ बन्दै मुसिकोट डाँडा «
रोजाइ बन्दै मुसिकोट डाँडा
रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ४ मा रहेको ऐतिहासिक मुसिकोट दरबारको नामले परिचित मुसिकोट डाँडाको संंरक्षणमा जिल्लाका विभिन्न निकायहरू अघि सरेका छन् । मुसिको नामले परिचित उक्त डाँडालाई पर्यटन क्षत्रका रुपमा विकास गर्ने भन्दै केही महिना अघिमात्र वृक्षारोपण तथा तारजालीले व्यवस्थित गराइएको छ ।
पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोकेको मुसिकोट डाँडाको संरक्षणमा जिल्लाका विभिन्न निकायहरू एकैसाथ जुटेपछि मुसि डाँडाको मुहारै फेरिएको छ । स्थानीय जन श्रमदान तथा विभिन्न निकायको आर्थिक सहयोगमा मुसिकोट दरबार उद्यान निर्माणलाई व्यवस्थित गरी जिल्लाकै एक पर्यटकीय क्षत्रको रुपमा विकास गर्न लागिएकोे हो ।
करिब ४ रोपनी क्षत्रफल ओगटेको मुसिकोट दरबार उद्यान निर्माणलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउनका लागि १२ लाख बढी रकम खर्च गरिएको छ । कुनै समय जिर्ण बनेको मुसिकोट डाँडाको उद्यान निर्माणपछि अब भने यो स्थानबाट विभिन्न ठाउँहरूको अवलोकन गर्न सकिने भएको छ ।
कुनैबेला नेपाली सेनाको क्याम्प रहेको यो डाँडामा सर्वसाधारणका लागि समेत प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । करिब पाँच वर्ष जति नेपाली सेनाले भाडामा प्रयोग गरेको उक्त मुसिकोट डाँडाबाट नेपाली सेनाको अस्थायी क्याम्प हटाइएपछि यो ठाउँ केवल वस्तुभाउ चरिचरण गर्ने क्षेत्रमा परिणत भएको थियो । पर्यटनका हिसाबले जिल्लाकै एक महत्वपूर्ण स्थानको रुपमा चिनिएको यो डाँडालाई थप व्यवस्थापन गर्नका लागि विभिन्न निकायहरू संरक्षणमा जुटेका हुन् । तर, यो सहयोग पनि अपर्याप्त हुने भएकाले यस स्थानको चिनारीका लागि राज्यले अझै केही गर्र्नुपर्ने स्थानीय लोकेन्द्र शाहको भनाइ छ ।
नगरपालिकाभित्रका थुप्रै पर्यटकीय क्षत्रको व्यवस्थापनका लागि अब मुसिकोट नगरपालिकाले पनि ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलको खोजीगर्ने कामलाई अघि बढाउने बताएको छ । मुसिकोट डाँडाबाटै मुसिकोट नगरपालिकाको नाम रहन गएकाले पनि मुसि डाँडालाई ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने नगरपालिकाको आगामी योजना रहेको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख देवीलाल गौतमले बताए । वि.सं. १७६० साल तिर मुसिमार्फत् पत्ता लगाईएको यस डाँडालाई मुसिकोट दरबारका रुपमा चिन्ने गरिन्थ्यो । बाईसे तथा चौबिसे राज्यको समयमा नेपाल एकिकरण भएलगत्तै त्यसपछि यो डाँडा ओझेलमा परेको थियो ।
तर, पछिल्लो समय उक्त डाँडाको उचित संरक्षणमा सरकोकारवाला निकायको ध्यान गएसँगै आन्तरिक पर्यटकहरूको भिड लाग्न थालेको छ । अहिले मुसिकोट दरबारको संरक्षणका लागि स्थानीयवासी र विभिन्न सरोकारवाला एकजुट भएका छन् । गत वर्ष भदौदेखि दरबार संरक्षण समितिले अवलोकनका लागि शुल्क लिन थालेको छ । गत आवमा रु एक लाख २५ हजार आम्दानी भएको समितिले जनाएको छ । सो आम्दानीबाट वृक्षरोपण, गोडमेल, मूर्ति निर्माण तथा मन्दिर व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुगेको छ । प्रवेश शुल्क लिन थालेदेखि हालसम्म बाह्य तथा आन्तरिक गरी आठ हजारभन्दा बढीले मुसिकोट डाँडा अवलोकन गरेका छन् । डाँडाभित्र ऐतिहासिक मठ मन्दिर, त्रिशूल, बालउद्यान, मुसी, बँदेलगुफा, नागको प्रतिमालगायतको अवलोकन गर्न सकिन्छ । डाँडा अवलोकन गर्न दिनहुँ १०० भन्दा बढी पर्यटक आउने गरेका छन् ।
गत वर्ष कोरोनाको महामारीका कारण ९/१० महिना घाटा व्यहोरेका जुम्लाका होटल व्यवसायी भर्खर लयमा फर्किन
अमेरिकी नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्न आइतबार चार्टर्ड उडान गरिएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको अनुरोधमा
चीनले स्थगित ग-यो सगरमाथा आरोहण
छिमेकी चीनले कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै आफ्नो तर्फबाट हुने सगरमाथा आरोहण स्थगित गरेको छ